रक्सी पिउन आफ्नै छोरा बेचेपछि…. | Sambad Media
रक्सी पिउन आफ्नै छोरा बेचेपछि….
भारतको ओडिसा राज्यको भद्रक जिल्लामा मंगलबार एकजना युलीयुगी पिताले मोबाइल फोन र रक्सी किन्न आफ्नै ११ महिनाको छोरा बेचेका छन् ।
प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले आरोपी बलराम मुखीलाई २३ हजारमा आफ्नो छोरो बेचेको आरोप लगाएको छ। आरोपी पिताले दुई हजारमा मोबाइल फोन र १५ सय मा छोरीका लागि पायल किनेका थिए । उनले बाँकी बचेको १९ हजार ५ सय रुपैयाँ रक्सी किन्न खर्च गरेका थिए । प्रहरीले मुखीकी श्रीमतीसँग पनि सोधपुछ गरेको छ । मुखीको एउटा छोरा अर्को पनि छन् ।
भद्रकका एसपी अनुप साहुका अनुसार मुखीको कुनै नियमित आम्दानी थिएन । उनले भने–आरोपी पिता सरसफाईकर्मी हुन् । प्रहरीका अनुसार यस्तो लाग्छ कि उनलाई मदिराको लत छ ।यो अपराधमा मुखीका साला बलिया र अर्का एक जना पनि संलग्न रहेको पाइएको छ।
मुखीले आफ्नो छोरा सोमनाथ सेठीलाई बेचेका हुन् । भद्रक गाउँका प्रहरी निरक्षिक मनोज राउतका अनुसार सोमनाथका २४ वर्षीय छोराको २०१२ मा मृत्यु भएको थियो। छोराको मृत्युपछि नै सोमनाथकी श्रीमती डिप्रेशनमा थिइन् । श्रीमतीलाई रोगबाट मुक्त गर्न सोमनाथले बच्चा किनेका थिए । एजेन्सी
विराज पौडेलको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिती चयन गर्दै'”द ह्वाइट जोन” को चौथो सम्मेलन भब्यरुपमा सम्पन्न
वडा कार्यालयमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदा ज्येष्ठ नागरिक खुशी
तनहुँमा ६४ थान हतियार बुझाइयो
भक्तपुरमा आचारसंहिता उल्लंघन
चुनावपछि नयाँ युग : ओली
झोला चलचित्रका लेखक तथा साहित्यकार कृष्ण धरावासीको ग्रेट फल्स उपन्यास २०१७ को अनेसास सर्वोत्कृष्ट पुस्तक घोषित
डिसीमा दोश्रो नेपाल अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव २०१८ हुने
निर्वाचन भएको वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि